Mahajanga sy Mahamasina Nohogahogain’ny olona Rajaonarimampianina
Efa lalina loatra ny fankahalan’ny ankamaroan’ny vahoaka ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina, raha dinihina amin’ny zava-nisy ny faran’ny herinandro teo.
Niezaka nanao seho ivelany ny HVM tany Mahajanga, ny sabotsy teo nandritra ny nitokanan’ny filoha ny hotely kintana efatra Baobab Tree an’ny mpandraharaha tsy miankina. Raikitra ny fanangonan’olona nanotrona ny filoha vao nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Amborovy, saingy ireo olom-panjakana ny ankamaroany. Mba niomana ihany koa ny vahoaka tsy mpankasitraka tamin’ny filanjana sora-baventy tsy fankasitrahana izao fitondrana izao, indrindra fa ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Nomena baiko avy hatrany kosa ny mpitandro filaminana haka ny sora-baventy nentin’ireo vahoaka naneho hevitra. Mitovitovy amin’izay ihany koa ny zava-niseho tetsy amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina omaly hariva nandritra ny famaranana ilay lalao Amboaran’ny filoha na ny “coupe du président”. Tratry ny horakororaka sy siotsiokan’ny olona ny tenany, ary vao mainka nanome endrika ratsy azy ny fahatapahan-jiro tampoka. Teo am-panolorona ny amboara ny minisitry ny angovo Lantoniaina Rasoloelison no nitranga ny fahatapahana, ka tsy hay na fifandrifian-javatra ihany efa fambara ratsy ho an’ny mpitondra ireny. Miseholany sy miseho ampahibemaso ny tsy fankasitrahana ny filoha, ary manomboka tsy matahotra intsony ny olona. Hahatonga saina azy sy hitondra azy amin’ny fanajana tena tsy hikiry hifikitra amin’ny fahefana ve izany sa hitohy ny didoha noho ny fitiavan-tseza?